दलान नेपाल : कसरी चल्छन मधेशवादी पार्टीहरु ?
कसरी चल्छन मधेशवादी पार्टीहरु ?
at 9:05 AM Posted by Dalan
मधेशवादी पार्टीहरुको अव्यवस्थीत संगठन कै झझल्को उनीहरुको कार्यलय सचांलन देखि दैनिक प्रशासनमा देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपालको केन्द्रिय राजनितीको महत्वपुर्ण भुमिकामा देखिन थालेका मधेशवादी पार्टीहरु कसरी संचालन भईरहेको छ ? तमलोपाका महामन्त्री गोविन्द चौघरीलाई सोध्दा उनले भने तपाईले जसरी हेर्नु भएको छ, त्यसरी नै तमलोपा लगायत अन्य मधेशवादी पार्टीहरु चलिरहेको छ । उनको भनाईको आशय थियो कुनै पनि मधेशवादी पार्टीहरुको कार्यलय संचालन देखि दैनिक प्रशासन अहिले सम्म ठोस रुपमा चुस्त दुरुस्त छैन ।
निर्वाचन आयोगको आचार संहिता अनुसार निर्वाचानमा भाग लिएका पार्टीहरुको आय व्यय तथा दैनिक प्रशासनका सवै काम पारदर्शी हुनु पर्छ र त्यसको बार्षीक लेखा परिक्षण गराएर आयोगमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । आयोगको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्ष ०६९ को आय व्वय विवरण तमलोपा र सदभावना पार्टीले अहिले सम्म बुझाएका छैनन । फोरम नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकले भने बुझाएका छन । फोरम नेपालको ०६९ मा २० लाख आफनो पार्टीको खर्च रहेको बुुझाएको छ भने उनले उक्त बर्षमा आफनो पार्टीले १२ लाख आम्दनी गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी फोरम लोकतान्त्रिकले ०६९ मा आफनो पार्टीको खर्च ३० लाख रहेको विवरण बुझाएका छन भने उक्त बर्ष लोकतान्त्रिक फोरमले साढे २९ लाख आम्दानी गरेको विवरण आयोगमा बुझाएका छन ।
विवरण नबुझाएका तमलोपा पार्टी कार्यलयले आफुहरु विवरण बुझाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जनाएका छन भने सदभावना पार्टी कार्यलयले अहिले विवरण संकलनकै सुरसारमा छन । तमलोपा पार्टीहरुका अनुसार तमलोपाको बार्षीक खर्च भने २० लाखको हराहरीमा छन भने आम्दनी १२ लाख को हराहरीमा । सदभावना पार्टी कार्यलयका अनुसार ०६८ सालमा उक्त पार्टीको बार्षीक खर्च ४ लाखको हराहरीमा छ भने आम्दनी ९ लाखको हराहरीमा ।
हुनत नेपालको कुनै पनि राजनिती दलहरु आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई महत्वपुर्ण नठानेको गुनासो बेला बखत आउने गर्छन । त्यसमा पनि मधेशवादी दलहरुमा अध्यक्षको एकाधिकार कै कारण यी पार्टीहरु फुटने गरेको आरोप मधेशी नेताहरु पार्टी फुटाउदा लगाउने गरेको छ ।
मधेशवादी पार्टीहरुको गतिविधीलाई नजिकवाट नियाल्ने भित्रियाहरुहरु भन्छन मधेशवादी पार्टीहरु केही सिमित नेताहरुको खल्तीमा छन र त्यही वाट संचालन हुने गर्छन । त्यही कारणले होला तपाई हामी मधेशवादी पार्टी कार्यलयमा पुगेर कुनै सुचना देखि विवरण माग्दा उनीहरु सिधै केही नेता विशेष नाम लिएर उनीहरु संग भेटन भन्छन । अर्थात पार्टी कार्यलयमा रहने कर्मचारीसंग या त सुचना नै हुदैन या उनीहरुलाई त्यसको बारेमा बोल्ने अधिकार दिएको हुदैन । त्यस पछि यी पार्टीहरुको अर्को कमजोर पक्ष भनेको सुचना संकलनको कुनै अधिकारीक निकाय नहुनु । केही नेता विशेषले आफनो सिमित प्रयोजनका लागी मधेशका वारेमा सुचना समग्री संकलन गरेको भेटिए पनि कुनै पनि मधेशवादी पार्टी कार्यलयमा मधेशका वारेमा पर्याप्त जानकारी दिने खालेका सुचना साम्रगी छैनन ।
मधेशका हकहित मात्रै हैन कि अधिकार वाट वन्चित मधेशीलाई अधिकार दिलाउने उदेश्उले खुलेका मधेशी पार्टीहरुका नेताहरु स्वयंम मधेशका वारेमा अनभिज्ञ देखिन्छ । तमलोपाका महामन्त्री चौधरी भन्छन मधेशवादी पार्टीहरु अव्यवस्थीत हुनु स्वभाविकै हो किनकी अहिले सम्म मधेशवादी दलहरु नै अव्यवस्थीत छन, त्यसैले यी दलहरुको हरेक काम अव्यवस्थीत नै देखिन्छ । चौधरी भन्छन, राजनिती दलका लागी सबै भन्दा पहिला संगठन वलियो हुनुपर्छ र त्यसले नै सबै कामलाई व्यवस्थीत गर्छ तर मधेशवादी दलहरु संविधानसभामा सशक्त रुपमा स्थान पाए पनि नेतृत्वले संगठन कसरी वलियो बनाउने तर्फ खासै काम नै गरेका छैनन, र यो नै मधेश राजनितीको दुर्भाग्य हो । मधेशवादी दलका एक शिर्ष नेताको बुझाई पनि यो भन्दा भिन्न छैन तर उनी भन्छन, अध्यक्ष वाहेक अरुले जिम्मेवारी पनि लिन चाहदैनन । सबै काम अध्यक्षकै स्तरवाट होस भन्ने मानसिकता भेटिन्छ, उनी भन्छन मधेशवादी पार्टीहरु स्थिर र ठोस रुपमा संचालन हुन अझै केही बर्ष लाग्न सक्छ । फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवको बुझाईमा मधेशी पार्टीहरुको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । उनी भन्छन, पार्टीको मुख्य स्रोत भनेकै चन्दा हो तर चन्दा दिनेहरु आफनो काम अनुकलतालाई हेरेर मात्रै चन्दा दिने गर्छन । त्यसैले सरकारमा हुदा मधेशी पार्टीहरुलाई हाईसन्चो हुन्छ भने वाहिर हुदा गाहे । तर आफनो पार्टी सरकारमा हुदा पनि र नहुदा पनि एकै नासले अघि वढीरहेको उनको दावी छ ।
सत्ता निर्भर खर्च
मधेशवादी दलहरुले नै दिएको विवरणलाई केलाएर हेर्ने हो भने उनीहरुको पार्टी सरकारमा हुदा पार्टीको खर्च वढेको र सरकार भन्दा वाहिर भएको बेलामा पार्टीको खर्च कम भएको देखिन्छ । फोरम नेपालको ०६९ को वार्षिक खर्च २० लाख ८ हजार ४ सय ६० छन भने ०६८ को बार्षिक खर्च २० लाख ७३ हजार ४ सय ८६ छन । ०६८ को केही यी पार्टी सरकारका एउटा हिस्सेदार थिए । यसैगरी ०६९ मा विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरमको खर्च ३० लाख ४१ ह्जार ९ सय १ छ भने ०६८ को खर्च २९ लाख ६० हजार ६ सय २ छ । ०६८ कै विच देखि ०६९ सम्म गच्छदार सरकारका गृहमन्त्री थिए । यसैगरी सदभावना पार्टीको विवरणले पनि त्यही देखाउछ । ०६७ मा ३ लाख भन्दा कम बाषिर्क खर्च रहेको सदभावना पार्टीको ०६८ मा ४ लाखको हाराहरीमा बार्षिक खर्च छन । तमलोपाको यसरी छुटयाउने गरी त खर्च विवरण उपल्ब्ध छैन तर तमलोपाका महामन्त्री चौधरीका अनुसार पार्टी सरकारमा हुदा पार्टी संचालन गर्न सजिलो हुने गरेको छ । उनका अनुसार विगतमा तमलोपा सरकार हुदा मन्त्रीहरुले मासिक १३ हजार लेवी पार्टीलाई बुझाउने गरेका थिए । चौधरीका अनुसार तमलोपामा अहिले पनि अध्यक्ष देखि केन्द्रिय सदस्यहरु लेवी बुझाउने गरेका छन । अध्यक्षले मासिक ५ हजार, उपाध्यक्षहरु मासिक ३ हजार ५ सय, महामन्त्रीहरु ३ हजार र सदस्यहरु ५ सयका दरले मासिक लेवी बुझनउने गर्छन । यसैगरी फोरम नेपालका अध्यक्ष सहित पदाधिकारीहरु पनि मासिक लेवी वुझाउने गरेको फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवको भनाई छ । यादवका अनुसार फोरम लेवी र चन्दाकै भरमा चल्ने गर्छन । पाटीहरुको मुख्य स्रोत नै चन्दा हो, तर सरकारमा हुदा चन्द्या खासै उठदैनन वरु सरकार भन्दा वाहिर बस्यो भने पार्टी संचालनका लागी चन्दा उठदो रैछ, यादव भन्छन । यादवका अनुसार फोरम नेपालका भात संगठनहरुले गने कार्यक्रममा पार्टीले सहयोग गर्दैन र पार्टीले उनीहरुको वारेमा हिसावकिताब पनि राख्दैनन । एउटा भातृ संगठनको महाधिवेशनमा कम से कम १० लाख भन्दा वढी खर्च हुने गरेको नेताहरुको भनाई छ । यादव भन्छन, त्यो कुरा उनीहरु ले नै जानुन हामीले नत खर्च दिन्छौ नत हिसाब माग्न जान्छौ, हामी ले सबै भातृसंगठनको कार्यक्महरुमा पर्चा पम्पलेट छपाई दिने गरेका छौ, जुन २५ देखि २० हजार बराबरको हुन्छ । सदभावना पार्टी महासचिव मनिष सुमनका अनुसार सदभावना पार्टीको आम्दन्ीको मुख्य स्रोत भनेकै लेवी र चन्दा नै हुन । उनी भन्छन, तर हाम्रो पार्टीको सबै कुरा पारदर्शी नै छन । तर यी पार्टी नेताहरुले ल्यक्रिगत रुपमा कुराकानी गर्दा पार्टीका अध्यक्ष वाहेक कसैले लेबी बुझाउदैन ।
फोरम नेपालको ०६९ मा कुल खर्च- २००८४६० । फोरम नेपालको ०६९ मा कुल आम्दनी -१२२४३९०
फोरम नेपालको ०६८ मा कुल खर्च - २०७३४८६ । फोरम नेपालको ०६८ मा कुल आम्दनी -१३२२७९८८
फोरम लोकतान्त्रिकको ०६९ मा कुल खर्च -३०४१९०१ । फोरम लोकतान्त्रिकको ०६९ मा कुल आम्दनी - २९४४०००
फोरम लोकतान्त्रिकको ०६८ मा कुल खर्च -२९६०६०२ । फोरम लोकतान्त्रिकको ०६८ मा कुल आम्दनी -३२७४२६५
सदभावना पार्टीको ०६८ मा कुल खर्च -३९८००० । सदभावना पार्टीको ०६८ मा कुल आम्दनी - ८७००००
सदभावना पार्टीको ०६७ मा कुल खर्च - २८६१८५ । सदभावना पार्टीको ०६७ मा कुल आम्दनी - १५०४६८५
तमलोपा नेपालको ०६९ मा कुल खर्च -२५५४७५० । तमलोपा नेपालको ०६९ मा कुल आम्दनी -२५५४७५०
तमलोपाको ०६९ मा कुल खर्च - २०००००० । तमलोपाको ०६९ मा कुल आम्दनी -२०००००
स्रोत - निर्वाचन आयोग, तमलोपा र सदभावना पार्टी कार्यलय